Chọpụta ebe kachasị mma ị ga - ahụ na obodo Basque | Akụkọ Njem
Ihe ị ga-ahụ na mba Basque
El Obodo Basque, obodo dị n'ebe ugwu nke nwere ọtụtụ ihe iji nye ndị njem nleta, site na mbara ala ndị mara mma na gastronomy nwere mmasị na ọtụtụ ihe ncheta. Ame ụzọ site na Basque Country nwere ike iwepụta oge, n'ihi na enwere ọtụtụ nkuku iji hụ karịa obodo ukwu ya. Ọ bụ ebe mara ezigbo mma, ọ bụghị n'efu ka a họọrọ iji gbaa ụfọdụ egwuregwu 'Game nke n'ocheeze'.
Anyị ga-eme ndepụta na ụfọdụ isi ihe nwere mmasị na ya a ga-ahụ na Basque Mba. Enwere ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ, mana anyị ga-akwụsị na ndị isi. Obi abụọ adịghị ya, mpaghara a ejisiela ike idobe isi ya na narị afọ gara aga, yana ọdịbendị mara akara, gastronomy na-atọ ụtọ na oghere na-acha akwụkwọ ndụ na-echekwa ọmarịcha mma ha niile.
1 nakwa na Bilbao
3 Vitoria Gasteiz
5 San Juan de Gaztelugatxe
nakwa na Bilbao
Anyị na-amalite na Bilbao n'ihi na ọ bụ ya kasị ukwuu na obodo na o nwere ọtụtụ ihe na-enye. Site na ọdịbendị na imepụta osimiri ndị dị nso na ebe ndụ akwụkwọ ndụ. Ọ bụ ya mere o ji agwakọta ọdịnala n'ụzọ zuru oke na oge a. Otu n'ime ihe ndị pụtara ìhè ileta na nke ahụ aghọwo ihe nnọchianya nke obodo bu Guggenheim Museum, nke Frank Ghery mere site n'i imomi ụgbọ mmiri. Mana enwere ndị na - emepụta ihe ndị na - elekwasị anya n’obodo a, dịka Santiago Calatrava, onye haziri ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ Phillippe Starck, onye mepụtara etiti obodo Alhóndiga.
N'ime obodo ị ga-aga obodo ochie, nke bụ a maara dị ka 'ụzọ asaa' n’ihi na ọ bụ ha mejupụtara obodo ochie mgbe ochie. Ọ bụ ebe dị ezigbo ndụ, ebe ị nwere ike ịga ịchọ Basque pintxos a ma ama. Na mpaghara ochie ị nwekwara ike ịga na Katidral nke Santiago ma ọ bụ Plaza Nueva.
Anyị na-aga n'ihu na nke ọzọ dị mkpa obodo, San Sebastián, ebe La Concha osimiri na ya ama-eme mkpagharị. Nke a abụrụla oge ọkọchị maka oke osimiri ya, La Concha, Ondarreta na Zurriola. Obodo ochie ya mara mma kwesịrị ka a hụ ya, nke dị n'okpuru ụkwụ Ugwu Urgull. Na mpaghara a bụ Plaza de la Constitución na ụka Santa María del Coro. Na San Telmo Museum ị nwere ike ịmụ banyere Basque akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị. N'ebe ndịda nke obodo ochie ahụ bụ ebe a maara dị ka thelọ Ọrụ Ihunanya, maka ụlọ ya ndị mara mma.
na Monte Urgull ị nwere ike ịga na Castillo de la Mota, ebe nchekwa na obodo. Echefukwala ịhụ Peine del Viento na njedebe nke osimiri Ondarreta, ihe osise nke Eduardo Chillida kere. Na Ahịa Bretxa ị nwere ike ịchọta ụdị ngwaahịa a na-ahụkarị na mpaghara ahụ.
Hazie njem gị
AKW FLKWỌ Flight maka njem gị
Detuo HOTEL nke njem gị
Mmụta kachasị mma na arụmọrụ na Spanish
Mgba ụgbọ ala maka njem ahụ
Nweta mkpuchi njem na 5% ego
Detuo TRANSFER gị n’ọdụ ụgbọ elu
Na Vitoria ị ga-ahụ obodo kachasị mma echekwara na obodo, yana ụlọ ndị mara mma Renaissance. A ochie ebe ị pụrụ ịhụ Bendaña na Escoriaza-Esquivel Palaces. N'ime nke mbụ n'ime ha enwere ụlọ ngosi ihe nka nke akwụkwọ ozi. N’obí eze nke Augustín-Zulueta bụ ebe ihe nlere nke Fine Arts dị. A maara Katidral nke Santa María 'Old Katidral' ma wuo ya na ụdị ndị Gothic. Green dị oke mkpa dịkwa n'obodo a, ọ bụ ya mere o ji nwee ihe a maara dị ka 'mgbanaka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ', mpaghara gbara obodo ahụ gburugburu ma zuo oke maka ịgagharị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe obere oge ezumike, ị kwesịrị ịga Plaza de la Virgen Blanca, mpaghara dị n'etiti obodo ochie ebe ị nwere ike inwe pintxo n'ọtụtụ ụlọ mmanya na mbara ala. Anyị ga-ahụkwa otu ihe ahụ na Plaza Nueva ma ọ bụ Plaza de España.
Obodo mara mma nke Mundaka di na Urdabai Biosphere Reserve ma ama nke ọma maka osimiri ya, ebe sọọfụ bụ otu n’ime egwuregwu a kacha eme na ya. Ebe a na-egbu azụ bụ otu n’ime ebe mara mma nke ukwuu ma gaa leta ya, ebe ije na sunbathe. Ermita de Santa Catalina dị na peninshula na mpụga ya, nwere echiche dị egwu banyere oke osimiri. Na mgbakwunye, osimiri ya nwere oke aka ekpe kacha mma na Europe, ya mere ọ bụ ebe ndị surfers si n'akụkụ nile nke ụwa.
Agwaetiti a dị n’akụkụ ụsọ oké osimiri nke Bizkaia, nanị kilomita 35 site na Bilbao. Ọ bụ ebe amaara na mbụ n'ihi oke mma ya, mana na mbata 'Game nke n'ocheeze' ọ bụrụla ebe ndị nleta maka usoro ahụ, ebe ọ bụ na a na-ese ihe nkiri na ya. N'etiti agwaetiti ahụ bụ onye ọbịa nke San Juan Bautista, nke a na-eru site na ịgafe akwa mmiri jikọtara na peninshula na site na ihe karịrị narị abụọ nzọụkwụ. Akụkọ mgbe ochie nwere na ọ bụrụ na ị rute ebe ahụ wee gbanye mgbịrịgba ugboro atọ mgbe ị na-achọ ihe, ọ ga-emezu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ihe ị ga-ahụ na mba Basque
Atụmatụ na ụmụaka na Madrid
Ala mmiri Jutland